यस्तो थियो एसपी यादवको जिल्ला बसाइँ ।
प्रनिश थापा । कपिलवस्तु , ३० असोज । कपिलवस्तुका एसपी मनोज कुमार यादव कर्णाली प्रदेेेश प्रहरी कार्यालय तानिएका छन् । उनलाई प्रहरी मुख्यालयले मंगलबार कर्णाली प्रदेश प्रहरीमा काज सरुवा गरेको हो । उनलेे कमाण्ड सम्हालेलगत्तै जिल्लाबाट गाई गोरुको तस्करीमा वृद्धि भएको र तस्करहरू समेत सलबलाउन थालेको भन्ने उजुरी गृह मन्त्रालयसम्म पुगेपछि प्रहरी मुख्यालयले उनको सरुवा गरेको मुख्यालय स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध सातवटा भन्दा बढी बेनामी उजुरी परेपछि मुख्यालयले उनीमाथि आन्तरिक रूपमा छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो । सो, क्रममा एसपी यादवले जिम्मेवारी सम्हालेको जिल्लामा तस्करीका लाइन ब्यापक मात्रामा खुलेको र कार्यसम्पादन समेत राम्रोसँग नगरेको पाइएपछि उनलाई असक्ष्म भन्दै मुख्यालयले कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा काज सरुवा गरेको बताएको छ । एसपी यादवविरुद्ध यसअघि पनि मुख्यालयमा पटकपटक उजुरी पर्ने गरेको थियो । अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले नयाँ नेतृत्व एसपी अच्युत पुडासैनीले पाएका छन् ।
यस्तो थियो एसपी यादवको जिल्ला बसाइँ
कपिलवस्तु जिल्लालाई भारतीय सिमा नाकाका रूपमा लिइन्छ । तर, यहाँ काम भन्दा पनि दाम खोज्ने प्रहरी अधिकृत आउन तछाडमछाड हुने गर्छ । एसपी मनोज कुमार यादव पनि त्यहीँ प्रहरी मध्य गनिन्छ । उनको कार्यशैली ठिक नभएको स्थानीयबासिन्दा बताउँछन् । तत्कालीन समयमा कृष्णनगरमा डिएसपी हुँदा तस्करहरूलाई सहयोग गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको भनी चर्को आलोचना खेप्नुपरेका उनै एसपी यादव अहिले बढुवा भएपछि पनि कपिलवस्तुमै नेतृत्व सम्हाल्न पाएका भाग्यमानी प्रहरी अधिकृत हुन् ।
उनको संरक्षणमा बहादुरगञ्जमा सरकारी अनुदानको कृषि मल (युरिया मलखाद) तस्करी गर्ने नेपाल-इण्डो प्लाइउड उद्योगसित मिलेर तस्करी सुचारू भएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । भिडियो सार्वजनिक भएसंँगै गृह मन्त्रालयले तत्कालै छानबिन समिती गठन गरेर सत्यतथ्य बुझी कार्वाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालय , पाँच नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पटकपटक आवश्यक निर्देशन दिदैआएको थियो ।
सो क्रममा महानिरीक्षकको सचिवालयबाट भएको पटकपटकको परिपत्र लाइ समेत प्रदेश प्रहरी कार्यालयले यस्मा कुनै सत्यता नभएको भनी लेखी पठाएपछि समेत उजुरी पर्ने क्रम रोकिएको थिएन । र, अन्त्यमा सचिवालयकै टोलीले आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्दा उनलेे जिल्लामा नेतृत्व सम्हाल्न नसक्ने करार गर्दै सरुवा गरिएको हुन सक्ने स्रोत बताउँछन् । सरकारी अनुदानको मालखाद्य तस्करीमा बहादुरगंजका सई हेम्बर प्रसाद पाण्डेको पनि संलग्नता रहे पनि उनलाई भने मुख्यालयले अझै चलाएको छैनन् । एसपी यादवलाई काज सरुवा गरेपनि पाण्डेले प्लाइउड फ्याक्ट्री बाट मासिक रुपमा मोटो रकम बुझ्ने गरेको र एसपी यादवलाई पनि केही कमिशन पठाउने गरेपनि उनलाई भने मुख्यालयले यथावत नै राख्ने निर्णय गरेका छन् ।
घुमुवा प्रयोग गर्दै रकम अशुल्दै एसपी यादव ।
यता , एक दर्शकभन्दा बढी समयसम्म घुमुवामा बसेर बदनाम कमाएका हवल्दार पुरन केवटलाई घुमुवामा खटाइ अशुली कार्य गर्दैआएका छन् । उनको दरबन्दी जिल्लामा छैनन् । यद्यपि , उनलाई समेत प्रयोग गरी एसपी यादव दिनरात उठन्थे गतिविधिमा सक्रिय भइरहेका छन् भने चामल व्यापारीहरूसित समेत घुस मागेर हैरान बनाउने गरेका थिए । जिल्लाको कमाण्ड सम्हालेसँगै उनको घुस अशुली दोब्बर भएको थियो । जिल्लाका व्यापारीहरूको सूची तयार पारेर उनलेे मासिक रुपमा अबैध असुली गर्दैआएका छन् ।
रंगपुरका चामल व्यापारीहरूलाई चिया खाने बहानामा बोलाएर एसपी यादवले मासिक रुपमा पैसा बुझाए आफूले केही समस्या उत्पन्न नगर्ने बताउने गरेका थिए । उनीहरुसित कागजपत्र हुँदा हुँदै पनि अबैध असुली गर्ने गरेका थिए । एसपी यादवले रंगपुरका तीनजना चामल व्यापारीसँग महिनामा एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेको छ । उनलेे प्रत्यक महिनाको २ गते रकम लिने गरेका हुन् । भने , रंगपुर नाकाबाट भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सहुलियतमा वितरण गरेको चामल राजश्व नतिरी निर्वाधरुपमा नेपाल भित्रिरहेको छ । भारतबाट नेपाल तस्करी हुने तस्करसँग मिलोमतोमा प्रहरीले नै सहयोग गर्ने गरेको छ ।
प्रहरी कार्यालयभित्रै बँदेल पाल्दै एसपी यादव
कानूनले बर्जित गरेको कार्य गर्ने कपिलवस्तुका एसपी मनोज कुमार यादवले गैरकानूनी ढंगबाट प्रहरी कार्यालयभित्रै बँदेल पालेको समेत रहस्य सार्वजनिक भएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार शान्ति सुरक्षालाई नियन्त्रणमा लिन पुगेका एसपी यादवले भाद्र पहिलो सातादेखि प्रहरी कार्यालयमै कानून विपरित बँदेल पालेका थिए । बिरोध भएपछि असोज पहिलो सातामात्र डिएसपी रवि रावल, मुद्धा फाँटका सई गोपाल श्रेष्ठ लगायतको प्रहरी टोलीले रातीको झण्डै पौने १० बजे डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवालाई बँदेल बुझाएको प्रहरी स्रोत उल्लेख गर्छ ।
इन्चार्जसित पैसाको बार्गेनिङ
यता, जिल्लाको मातहतमा कार्यारर्त अधिकांश प्रहरी इकाइहरु सित समेत एसपी मनोज कुमार यादवले अस्वभाविक रूपमा रकम माग गर्ने गरेको मातहतको प्रहरी गुनासो गर्छन् । इन्चार्ज भइ जाने भए आफूलाई केही हिस्सा चाहिने भन्दै आफूलाइ बारम्बार तनाव दिने गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतअनुसार हामी उनी विरुद्ध आजित भएका थियौँ । हिजो मुख्यालयले काज सरुवा गरेपछि भने हामीलाई अब केही राहत हुन्छ कि ?
प्रेस युनियनका सभापति भण्डारीलाई मुद्दा ।
खबर संकलन गर्ने क्रममा कहिले राम्रो समाचार सम्प्रेषण हुन्छ त कहिले नराम्रो । राम्रोमात्रै समाचार कसैको पनि प्रकाशित हुँदैन । ढिलो चाडो कहिलेकाहीँ समाचारमा भिन्नता हुन्छ नै त्यो भन्दैमा राम्रो मात्रै समाचार हाल्नुपर्छ भन्ने पनि होईन ।
उनलेे जे गरेको छ त्यो पत्रकारले लेख्ने काम गर्छ र जनतालाई सुशुचित बनाउदै सत्यतथ्यमा रहि निडर भइ खबरदारी गर्छ । उस्को राम्रो पक्षको मात्रै समाचार बनाउनुपर्छ भन्ने केही छैनन् । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्नू पर्छ । तर, कपिलवस्तुका यस्ता महाशय हुनुहुन्छ । गलत काम गर्दा समेत राम्रो समाचार हाल्नै पर्छ । नत्र मुुद्दामामिलामा लाग्छन् । एसपी मनोज कुमार यादव यस्ता ब्यक्ति हुन् ।
उनको विरुद्धमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई पटकपटक मुद्दा हालेर समाचार संकलनमा अबरुद्ध पुर्‍याउने कार्य हुँदै आएको छ ।
स्वतन्त्र भइ समाचार प्रकाशित गर्दा रिसबी राख्ने एसपी यादव प्रति आमनागरिकले के अपेक्षा राख्ने ? साझा न्युजका प्रधान सम्पादक , एभिन्युज टेलिभिजनका कपिलवस्तु संबाददाता तथा नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तुका सभापति गोपाल भण्डारीलेे सिमा नाकामा हुने गरेको तस्करीका विरुद्धमा खबर संकलन गर्दा उनी विरुद्ध पटकपटक उजुरी हाल्ने काम हुँदै आएको छ ।